Miala amin'ny bots amin'ny Google Analytics - Nanazava tamin'ny Expert Expert
Ho an'ireo izay vao haingana amin'ny hevitra hoe manana mari-pamantarana an-tserasera amin'ny tatitra Google Analytics, i Michael Brown, Mpanantanteraka Success Manager an'ny Semalt Digital Services, dia manolotra ohatra iray amin'izany.
ilovevitality.com dia sehatra iray izay miseho hatrany amin'ny tatitra momba ny fifamoivoizana. Raha misy mahita io anarana momba ny sehatra io hita ao amin'ny tatitra, ary miaraka amin'ny fifamoivoizana be dia be ao aminy, dia mitandrema satria tsy olona mijery ny tranonkala - gt radial rehvid.
ilovevitality.com dia asan'ny autoboot na bot iray mikorontana izay manana tanjona voalohany dia ny mikendry ny tranonkala amin'ny fifamoivoizana be toy izany, ampy mba handresena ny fahalianan'ny tompony hahitana ny maha-tokana azy io. Amin'ny farany, ny olona ao ambadiky ny bot manipulative manamboatra dia mahazo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Ny olana dia eto fa ny ampahan'ny tompon'ny tranonkala, ny bots dia afaka mamotika ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny data momba ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Noho izany dia tsy maintsy atao ny manapa-kevitra hanesorana na hanisika ireo bots amin'ny Google Analytics.
Misy fomba iray ahafahana manala ny bug ilovevitality avy amin'ny tatitra Google Analytics. Tokony hianatra ihany koa ny fomba hamantarana ny bot avy amin'ny fifamoivoizana organika. Saingy aloha, zava-dehibe ny mahatakatra ny antony ilana azy ireo handray ireo fihetsika rehetra ireo ary hanakanana botsika:
Fa maninona no manakatona bots
Ny botsa dia tena mampiahiahy raha misy olona iray mitazam-potsiny miaraka amin'ireo maromaro samihafa. Miharatsy kokoa ny toe-draharaha rehefa miseho ao amin'ny tatitry ny Google Analytics izy ireo raha toa ka mamadika ny angon-drakitra tsy ara-dalàna rehetra izy ary tsy azo ampiasaina hampihatra fampielezan-kevitra. Ohatra, ny tatitra rehetra momba ny fiovam-po sy ny tanjon'ny fifaninanana dia nanjary tsy marina. Ny tarehimarika aseho amin'ny grafika dia tsy mety. Indraindray, mety hieritreritra ny olona fa tsy mahomby ny tranonkala, fa raha ny tena izy, dia tsara kokoa noho ny efa nandrasana. Midika izany fa mety handrava ny fomba fijery rehetra momba ny fahombiazan'ny tranonkala ny varotra varotra
ilovevitality.com dia boka vaovao momba ny fifamoivoizana natao hamahana tranonkala. Manana ny mety ho fiantraikany amin'ny tranokala maro isanandro izy io. Mino ny manam-pahaizana fa ny tanjony dia ny mivarotra ny tompony amin'ny teny fanalahidy..Ny fitaovana izay ampiasaina amin'ny ilovevitality dia ambany noho ny kalitao ary misy fiantraikany mahatsiravina amin'ny tranonkala. Raha mahazo traikefa goavana avy amin'ny ilovevitality.com ny tranonkala, tokony hitadidy ny tompony fa farany dia handoa ny loharano ampiasain'ireo bots ireo. Ilovevitality miankina amin'ny tranonkala fampiantranoana tranonkala iray izay midika fa ny tranonkala dia hampiasa loharano azo ampiasaina amin'ny hetsika hafa mahomby. Izany no mahatonga ny fototry ny fisian'ireo webmasters maro amin'izao fotoana izao.
Famakiana Botsa avy amin'ny fidirana amin'ny tranokala
Tsy misy fomba hivoahana amin'izany fa tsy amin'ny alàlan'ny rakitra tompony. Afaka mametraka fehezan-dalàna ao amin'ny tahiry .htaccess ny olona iray mba hahazoana antoka fa manakana ny bot. Na izany aza dia tena mampidi-doza ny manakorontana miaraka amin'ny rakitra mpampiantrano. Ny fomba hafa dia ny manaisotra ny angon-drakitra.
Fomba hafa amin'ny fanakanana bots
Ireto manaraka ireto dia tetikady ampiasain'ny Google Analytics:
1. Sokafy ny GA ary atsaharo ny tabilao Admin.
2. Mifidiana kaonty mifanaraka amin'izany izay miantoka fa misy ny iray amin'ireo angona tsy miloko.
3. Safidio ny sivana ary kitiho ny sivana vaovao.
4. Apetraho ny sivana ary mifidiana fifamoivoizana. Ampidiro ny anarana marina ilay bot raha miteraka voka-dratsy.
5. Vonjeo ny fanovana.
6. Raha mbola mitovitovy amin'izany ihany, kitiho ny zana-tsipika ambany ambany amin'ny tatitra GA.
7. Mamoròna fanamarihana ny angon-drakitra nataonao.